DAAWO VIDEO:Ciidanka PSF ee Puntland oo Dignin Culus u Diray Deni Jawaabna ka Bixiyey talaabooyinku Qaaday - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Ciidanka PSF ee Puntland oo Dignin Culus u Diray Deni Jawaabna ka Bixiyey talaabooyinku Qaaday
November 26, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 13
Ciidanka Puntland Security Force(PSF) Ayaa Ka Jawaabey Siyaasada uu wado Madaxweynaha Puntland Siciid cabdullahi Deni waxayna fariin Dignin u Direen Madaxweyne Deni iyo Baaq Soomaali Weyn.
XOGTA Waraysi Pro.Abdiwali Halistii Meles Zenawi Geeska Afrika uu Ku Beeray oo Abey Soo Afjaray
Dhibta uu khilaafkani kusaleysan yahay waa mid ka dhalatay nidaam xumida weli Puntland ka haysata hannaanka guud ee dawliga iyo hoggaankeeda sareba. Runtii, Siciid Deni waa nin dadaalaya oo daacadna u ah horumarka Puntland, laakiin iimaha ugu xun ee madaxnimadiisa cambaarta ku noqday waa dhirifka badan ee aadka uga qaalib noqda iyo seeflabboodnimada ku lammaanan ee aan kafiirsiga lahayn. Khusladaha majarahayenimo (statesmanship) ee aasaasiga ah ayaa lamoodaa inuu ka arradanyahay oo kuna kallifay inuu kudhaco qaladaad istraatiji ah ee aan looga baahnayn muddadii uu xilka hayay.
Inuu Siciid Deni ciidamada qalabkasida ee Puntland u adeegsado siyaasiyiinta ay isaga marba iskudhacaan waa dhaqan kelitalisnimo ee dastuurka degelkeenna, dhaqankeenna suubban, iyo asaaliibta dawlad-wanaagga aad uga baxsan. Inuu iskudayo inuu ciidamada Puntland dhexdooda iskahorkeeno waxay Deni kutahay fadeexad iyo foolxumo weyn runtii.
Sidii aan dhowr goor oo hore nalka ugu qabtay, dad iyo dalkooduba ma hanan karaan dawladnimo iyo qarannimo dhab ah oo taam ah ilaa marka ugu horreeya loosiidhisto hannaan hayin ah oo sugan oo dadka isaga ah si gaar uga tarjumaya. Hannaanku waa dawliilka guud ee hab-nololeedka dad leeyahay, ayna gundhig iyo tiirarba u yihiin hiddaha iyo dhaqanka dadkaas dhaxalka u ah.
Dad kasta dhaxalka u goonnida ah ayuu murtimeerkiisa siyaasadeed ka yeelaalsadaa oo nidaamkiisa dawligana ka yagleelsadaa. Hab-nololeedkiisana hannaankiisa u gaarka ah ayuu kusaleeyaa oo gardhihiisa guud, xeerarkiisa, iyo qawaaniintiisana ka unkadaa oo kuna saleysiistaa.
Dad aan lahayn hannaan khaas ah waxaa kuhabsada haddiimooyin farabadan oo ay gundhig u yihiin dawlad-xumi mise dawlad-li’i, addoonsi toos ah amase dadban, jahawareer siyaasadeed, qaran-la’aan baahsan, colaado sokeeye ee aan dhammaad lahayn, baahi, gaajo, iyo faqri ku dabadheerada. Aakhirkana waxaa uu ku dambeeyaa inuu dad kale magan u noqdo oo ku hoos noolaado oo sidaasna ku tafiirgo’o – ama dhulkiisa ha lagu gumeysto ama dhul shisheeye ha iskadhiibee.
Haddaba, Soomaali ahaan iyo reer Puntland ahaanba, labadaas dabaqadoodba waynu leenahay dhaxal inoo gaar ah ee hannaan rasmi ah oo sugan oo weliba hayin ah inoo noqon kara, fadaljeerkaasna waa mid sugan oo aan doodba geli karin. Su’aashu waxay tahay in aynu annagu garaadkeeda leenahay oo garashadaasna soli doonno.
Puntland degdeg ayay ugu baahantahay in aqoonyahannadeedu, waxgaradkeedu, cuqaasheedu, ganacsatadeedu, hoggaan-dhaqameedku, culimadeeda salafka ah, iyo siyaasiyiinteeda asalka ahba heer goshiyeed u shiraan oo hannaan sugan oo aynu nidaamkeenna dawliga kusaleysanno degelka ugu dhisaan. Waahore ayayna ahayd in hawshan aasaasiga ah la haleelo.
Haddii aan sidaas la yeelin, dawlad-xumo mise dawlad-li’i mooyee walleynan dawlad-wanaagga loo wada taamayo ka calfan doonin abidkeen.
waa la idin waayay..
waase lasoo duceeyey, Allana waa aqbalay.
Meeshan ma shaqojoojin baa ka dhacday? marqaan muu noosheego sababta war cusub loo waayay.
Horoglayaasha Boosaso isku hor fadhiya maxay Tukarraq u xorayn waayeen? Isuma qaddo isuma quurtaa dhaanto.
Laand-ruugar ina laand-roobal says:
see wax u jiraan?
marqaan ma laga guuray, mise ninkii rari jiray xabsi buu dhexjiifaa?
warka na siiya
Laan-Ruugar ina slaand Roobel:
Adiga iyo dadka kula midka ah ee mental health problems qaba ayaa meesha looga kala tagay,Dadka Noocaaga ah 😩 ee Marqaannews ka dhigtay air Fresh inay ka qaataan isagana saaran Qurunka caloosha u jiifa ayaa loo Nacay.
Uraago uraago dhadhay.
Marqaan waxaan u malaynayaa hawl badan baa ku furantay ninkii noo hogaamin jiray balse goordhow wuu soo laaban. Intaa kadib, halkee wax inoo marayaan, dalkii iyo dadkii waaxay ku jiraan khuuro aad u dheer ilaa inta Abiiy axmed uu hogaanka soo xagsan doono. Ma ogtahay in shaxda siyaasada lawada ciyaarayo oo markii lagu buuqay uu lasoo baxay taaktiik cusub, taasina waxay gaarsiin doontaa inuu helo biladii labaad oo loogu maagacdarayo bilada dagaalka ‘war prize’.
Horta kaysoow adigu yaad u dhalatay? mase ogtahay daka dibadaha mudoo joogay ay biyaha ay cabaan lagasoo sifeeyo kaadidooda, mase ogtahay in marka biyaha musqulaha lagu shubo wabiyada dib loogu sifeeyo, taasna ay keentay in dad badan xajiin ka qaadaan ama dawakhan aanay garanay meel looga yimid. adiga marka cay baa kaasoo hartay ee waxaad yeeshaa biyaha liin isaga tuuji koley waa kaadidaadii iyo tii ariskaaga waxaad cbaysid maalin walba.
Dalkuna waqti xasaasi ah ayuu ku jiraa ee hala indha-indheeyo.
Subax wanaagsan kaadi cabayaal.
Fikraddaadu waa u mihiin caligaaga, waana miraha aad ka gurato maskaxdaada, Wofwalba Anigu ma caayo, Waxan maagaa kuwa Dulmiya Dadka aysan isku haybta ahayn iyo beegdi Shaqsi gaara.
Inta badan caydaydu waa ul ann ku edbiyo Horogle-yaasha iyo Dheegatada
Kaadi cabayaal haddaad naga dhigtay idinkaa xareed Xareed cabayaal ahe Allaha Abaarta idinka dulqaado aaaammmmmiiiiiinnnnnn.
@Laand-ruubal ina laandruugar iyo kayse
Oo kaadidii waxayba hada ka bilaabatay jabuuti oo marka suuliyada biyahooda la isugu geeyo meesha layiraahdo obokh ayaa deedna lagu waraabiyaa beeraha, sanadka soo socdana waxaa loo sifaynayaa dadweynaha jabuuti oo biyo yaraani haysato.
hadaad mooday in halkaa kaliya ay tahay dunida oo dhan baa kaadida u socota inay cabaan, maraykankan afartan iyo shansano ayaa laga cabayay.
abaartu miyaysan adiga ku hayn? mise Soomaali ma tihid iimaanlaawe.
Adigu Saqiir Cirroole ayaa tahay, Caqliga six years old baad ka tahay Cimrigana show googaradaha ka da’waynid.
Kaadida in la cabbo adigu cilmi ahaan uma aadan Dersine caado ahaan baad u lahaydeen oo dhaqan xumada dhaxal baad lahayd!!!! .
Inta Badan qofba aragtidiisu waxay aroorta Garaadkisa.
Meelaha home cares ee dadka Madax yaraha ah lagu hayo weli ma gashay
Haddi aadan ogayn booqo scale Brain 🧠, cabbir maskaxdaada.
Hadde noo sheeg meesha aad ka soo jeedid, ileyn Soomaali diidaye.
Midan ah in biyaha dadka looga sifeeyo biyihii ay hore u isticmaaleen waxay bilaabatay markii cir-bixiyeenada hawada sare loo diray oo ahayd inaanay helay biyo ku filan, sahay biyo badana aan loo sii rari karin. Dhowaan markii la ogaaday biyo yaraanta aduunka meelaha qaarkood ka jirta iyo sida qofka banii-aadamka ah uu ugu baahan yahay aysan wada heli karin, ayaa xoogga la saaray in dib loo isticmaalo biyaha, iyo in badda biyeheeda milixda laga saaro.
Adigu bal kaysoow wax noo sheeg adigoon caytamin ama aan darooryin, wax kasta ood qorto macno maleh eber-eber.
Ma waxaad kasoo jeedaaa Soomaali-diidkii? haday haa tahay jawaabtu, dee marna ha diidin marna ha sheegan Soomalinimadu kuumaba baahnee.
Kuwa ugu liita oo diidda Soomaalinimada markay meelkale tagaan waxay kusoo naanaabaan Soomaali baan nahay……. Ikhsi caleek!
Marka aad tagto meelaha caqliga lagu baaro oo aad hesho jawaabta maanka kugu jiro intu le’eg yahay ayaan kaaga jawaabaya.
Animals 🦓 waxa ugu garasho hooseyo pig 🐷 ama Doofarka estimate ahaa waa 0.5 , marka Fadlan tijaabi caqligaaga bal inta aad doofarka dheer tahay aad ogaatide, kaftanku wuu kaa xiran yahay.
Saaxiib, ruuxan magaca “Kayse” wata waxba waqtigaaga qaaliga ah ha iskaga lumin, annagaa hore ugu soo daalnay. Waa wax sixun u kharriban oo xataa Aayadaha Qur’aanka Kariimka iyo Axaadiista Rasuulka (SCW) soo jiiraya marka aad kuwaaniso. Sida aad ujeeddaba, akhlaaqda iyo insaannimada ayuu bakhti kayahay oo waxba isku ma falo.
Waana cawaantii boonta Mareexaan oo ay waayahanba Mareexaanka kale ee nasabka ah khaati ka taagan yihiin. Waa dacasleyda mooryaanta ah ee ay Farmaajo iyo Barre Huuraale duurarka hilbaha qeyriin ugu tuurtuuraan oo kuharowsadeen inay “Reer Diini” yihiin. Meel kasta iyaga ayaa ka wahwahleeya sida eeyda harmanaysa oo dadka afka iyo sanka goosta.
Afsoomaaligooda jajabka ahna kan ugu xun ayay ka barteen. Farmaajo ayuu kani adduun iyo aakhiraba kuseegay, waxa uu ku difaacana waa hawraarta cawaannimo sida caayda iyo aflagaaddada. Wax rajo ah maleh.
Sidaas ula soco saaxiib.